नेशनल हाइड्रोपावरको लाभांश घोषणा, ५०% हकप्रद पनि जारी गर्ने
काठमाण्डौ । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको फागुन १ गते बसेको बैठकले उक्त आर्थिक वर्षका लागि लाभांश घोषणा गर्नुका साथै वार्षिक साधारणसभा पनि डोकेको छ। कम्पनीले चुक्तापुँजी १ अर्ब ३८ करोड ५१ लाख ८६ हजार २०० रुपैयाँको कुल १९.५ प्रतिशतले हुन आउने २७ करोड १...
एशियन लाइफको एजीएमबाट २७% लाभांश अनुमोदन
काठमाण्डौ। एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको १३ औँ वार्षिक साधारणसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्तावित लाभांश अनुमोदन भएको छ। काठमाण्डौको मैतीदेवीस्थित एशियन लाइफ भवनमा भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले उक्त आर्थिक वर्षको सञ्चित नाफाबाट चुक्तापुँजीको कुल २७ लाभांश अनुमोदन गरेको हो। जसमा २५ प्रतिशतले...
एलआईसीद्वारा वार्षिक साधारणसभा आह्वान, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) लिमिटेडले आफ्नो १९ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको माघ ११ गते बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो फागुन ११ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको नक्सालस्थित एलआईसी शिक्षालय हलमा बिहान १०ः१५ बजेबाट भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७...
नाडेप लघुवित्तको एजीएम आज, यस्ता छन् अजेन्डाहरु
काठमाण्डौ । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो सातौँ वार्षिक साधारणसभा आज माघ १४ गते डोकेको छ। सभा धादिङको नौबिसेस्थित नौबिसे एग्रो रिसोर्टमा बिहान ११ बजेदेखि अनलाइन माध्यमबाट हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कुल २१.०५३ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गर्नेछ। जसमा २० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनार्थ १.०५३ प्रतिशत...
जानकी फाइनान्सको वार्षिक साधारणसभा फागुन ७ मा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो २५ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको माघ १२ गते बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो फागुन ७ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा जनकपुरधामको शिवचौकस्थित होटेल मानकी इन्टरनेसनलमा बिहान १० बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तावित कुल...
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा वार्षिक साधारणसभा आह्वान, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो चौथो वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो फागुन ६ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा पोखराको लेकसाइडस्थित वाटरफ्रन्ट रिसोर्टमा बिहान ११ बजेबाट हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्तावित कुल...
सर्वाेत्तम सिमेन्टको एजीएमबाट बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्ने अजेन्डा पारित
काठमाण्डौ । सर्वाेत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको तेस्रो वार्षिक साधारणसभाले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित भएको छ। कम्पनीको मंगलबार सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन ६० लाख कित्ता सेयर निष्काशन बुक बिल्डिङ विधिबाट गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको हो। सभाले धादिङ जिल्ला...
नेशनल माइक्रोफाइनान्सको एजीएम आज, बम्पर लाभांश पारित गर्ने
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बम्पर लाभांश अनुमोदन गर्न नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आज माघ ६ गते आठौँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। सभा धादिङको धादिङबेसीस्थित क्रिक रिसोर्टमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कुल ४५ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गर्नेछ। जसमा ४० प्रतिशत बोनस सेयर र...
बरुण हाइड्रोपावरको स्थगित भएको एजीएम माघ १२ मा गरिने, यस्ता छन् अजेन्डा
काठमाण्डौ । बरुण हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले स्थगित भएको आफ्नो १८ औँ वार्षिक साधारणसभा पुनः डाकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिले वार्षिक साधारणसभा पुनः यही माघ १२ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको अनामनगरस्थित कम्पनीको रिजस्टर्ड कार्यालयमा बिहान ९ बजेदेखि भर्चुअल माध्यमबाट गर्नेछ। यसअघि कम्पनीले गत पुस २९ गते...
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट बम्पर लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गर्दै फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नवौ बार्षिक साधारण सभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । संस्थाका अध्यक्ष भगबती चौधरीको अध्यक्षतामा संस्थाको केन्द्रयी कार्यालय दुहवी, सुनसरीमा साधारणसभा सम्पन्न भएको हो । सो साधारणसभाले ४२...
नवील बैंकको अध्यक्षमा पुनः उपेन्द्र पौडेल, पास भयो बम्पर लाभांश
काठमाण्डौ । नबिल बैंक लिमिटेडको ३७ औं वार्षिक साधारण सभाले बम्पर लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट ३८ प्रतिशत लाभांश(३३.६० प्रतिशत बोनस सेयर र ४.४० प्रतिशत नगद लाभांश) वितरण गर्ने संचालक समितिको प्रस्ताव पारित गरेको हो । साधारणसभामा आ.व. २०७७/७८ मा निजी क्षेत्रका बैंकहरुमध्ये उच्चतम...
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडको एघारौं वार्षिक साधारण सभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । बैंकका अध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भद्रकालीस्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा सीमित व्यक्तिको भौतिक उपस्थिति र अन्यको अनलाइन(जुम)मार्फत वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको हो । साधारणसभाले बैंकको चुक्तापूँजीको ६.०५ प्रतिशत...
काठमाण्डौ । आज पुस ३० गते एकैदिन ५ वटा वाणिज्य बैंकसहित २२ वटा कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा डोकेका छन्। नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिभिल बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकसहित २२ कम्पनीले आज एकैदिन वार्षिक साधारणसभा डोकेका हुन्। नियमअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म...